admin | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူရေး - တော်လှန်သူ့ ဂုဏံ အဟံဝန္ဒာမိ
>Cartoon Saw Ngo - Free all political prisoners1
Than Win Hlaing - U Ne Win 2
ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် - ဒါမျိုးမှ ယုံသည်
>Filipino activists in front of the Burmese Embassy
>Family of Khaing Hninn Shun Lei Yi said thanks to all supporters in the newspaper
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ် (၁၉) – ရှေးခေတ်လူတွေကို အားကျစရာလား
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ် (၁၉) – ရှေးခေတ်လူတွေကို အားကျစရာလား Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Sitting on the fence
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Sitting on the fence (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၉...
မောင်ကြူးရင့် – “ဧရာဝတီ”
Than Htay Maung မောင်ကြူးရင့် – “ဧရာဝတီ” (မိုးမခ) မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၉ ဧရာဝတီဟာ လူထုရဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါပဲ ဧရာဝတီဟာ လူထုရဲ့ တေးတပုဒ်ပါပဲ ဧရာဝတီဟာ လူထုရဲ့ ပန်းချီကားတချပ်ပါပဲ...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ထရမ့်၏ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ထရမ့်၏ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၂၉ (မိုးမခ) မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၉ Steven Levitsky နှင့် Daniel Ziblatt...
လုပ်ဇာတ်သတင်း၊ အမှန်လွန်ခေတ်နဲ့ ပုံပြင်ထဲပျော်တဲ့ ကျနော်တို့လူသားတွေ (၃) နိဂုံး ယူဗဲနိုအာဟာရာရီ၊ The Globe and Mail (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈) ဘာသာပြန်သာဂိ (မိုးမခ) မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ပကတိအမှန်တရားနဲ့...
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၆) (မိုးမခစာအုပ်စင် ကောက်နုတ်ချက်) မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉ အခန်း (၆) – သူရဦးရွှေမန်းအပေါ် အမြင်စောင်းနေမှု သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာ...
ဂျူနီယာဝင်း – မစ်ဇူရီက ကောင်ကလေးတယောက် သုို့မဟုတ် “၀ီနာ လျောက်သောလမ်း“ (အတွေးအမြင် ၃၁၉ ။ မတ်လ ၂၀၁၉) မိုးမခ၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉ (2001 ခုနှစ်ထုတ် M....
မင်းငြိမ်းအေး – ၁၃/ မတ်/ ၈၈
မင်းငြိမ်းအေး – ၁၃/ မတ်/ ၈၈ (မိုးမခ) မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ဖုန်းမော်ရဲ့၊အလောင်းဟာ ကျောက်သားဖြစ်လာပြီး ငါတို့ဟာ၊ကျောက်စာကိုထွင်းထုရပေါ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေး ဖိနှိပ်မှု အုံကြွမှု ပိုင်ရှင့်မဲ့အလောင်းများ လူမသိအောင်ကြွေတဲ့ကြယ် ကံ့ကော်ရနံ...
မောင်ရစ် – ဦးဝင်းတင်မွေးနေ့ နောက်ကြည့်မှန် (မိုးမခ) မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၉ ဦးဝင်းတင်သာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေရင် အသက် ၈၉ နှစ် ရှိပြီ။ ဆရာကွယ်လွန်တော့ ၈၄ နှစ်။ အခုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ၈၄...
မောင်စွမ်းရည် – ပန်းချီဆရာ၊ ကာယဆရာ၊ လက်သမားဆရာ …
ပန်းချီသရုပ်ဖော် – မောင်စွမ်းရည် မောင်စွမ်းရည် – ပန်းချီဆရာ၊ ကာယဆရာ၊ လက်သမားဆရာ … (မိုးမခ) မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၉ ကျနော်တို့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ၁၉၅၀-၆၀ ခုနှစ်များအတွင်းက ကျောင်းတွေမှာ...
မြင့်ကျော် – သတင်းသမားရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရား
မြင့်ကျော် – သတင်းသမားရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရား (မိုးမခ) မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၉ သတင်းသမားရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရားက ဘယ်အထိရှိသလဲ? ဒီမေးခွန်းက သတင်းသမားတွေ အတွက် သတင်းမီဒီယာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်သလို...
Than Htay Maung ကျော်ဟုန်း – ငါးမျှားတံရဲ့ မြှုပ်ကွက် (မိုးမခ) မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၉ ငြိပြီ၊ တဖက်က ရမ္မက်နဲ့ ဆွဲတယ်။ တဖက်က ဇောနဲ့ ရုန်းတယ်။ တဖက်နဲ့...
လုပ်ဇာတ်သတင်း၊ အမှန်လွန်ခေတ်နဲ့ ပုံပြင်ထဲပျော်တဲ့ ကျနော်တို့လူသားတွေ (၂)
လုပ်ဇာတ်သတင်း၊ အမှန်လွန်ခေတ်နဲ့ ပုံပြင်ထဲပျော်တဲ့ ကျနော်တို့လူသားတွေ (၂) ယူဗဲနိုအာဟာရာရီ၊ The Globe and Mail (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈) ဘာသာပြန်သာဂိ (မိုးမခ) မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၉ ဟယ်ရီပေါ်တာလို မှော်ဆရာပုံပြင်စာအုပ်နဲ့...
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အလျှံပယ်ကြွယ်ဝသော မူလလူ့အဖွဲ့အစည်း Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari (မိုးမခ) မတ် ၉၊...
Page 1 of 1,00512345...1005»